Soo dejisan Total Video Converter 3.71 – Vessoft
WindowsMultimediaTifaftirayaasha warbaahintaTotal Video Converter
Bogga rasmiga ah: Total Video Converter
Total Converter Video – software ah oo awood leh si loogu badalo files galay ee qaabab kala duwan. software The taageertaa shaqada leh qaabab badan audio iyo video iyo awood si loogu badalo files warbaahinta gelin qaabab gaar ah DVD-ciyaaryahan, XBOX 360, iPod, iPhone, PDA, iwm Total Video Converter waa karin inuu abuuro isagoo slide show a la a badan oo ka mid ah images iyo raacidda muusikada. software The u saamaxaaya in ay isu geeyo dhowr videos iyo Cajalado in file hal. Total Video Converter waa inay awoodaan inay soo saaro waxay kuwan raadkaygay maqal ah oo ka files video iyo iyaga badalo galay qaabab audio kala duwan.
Badalidda audio iyo video files
Badalidda files galay qaabab gaar ah qalabka kala duwan
Waxay abuurtaa show slide la raacidda muusikada a
Soo dejisan Total Video Converter
Faallo ku saabsan Total Video Converter
Total Video Converter Xirfadaha la xiriira
The video editor awood badan. Software wuxuu taageeraa noocyo kala duwan oo qalab in lagu soo qabto video ka mid ah shaashadda kombiyuutarka oo ku saxaa.